Hogaamiye Sare oo katirsanaa Kooxda Daacish oo Duqeyn lagu dilay – STAR FM SOMALIA
Hogaamiye Sare oo katirsanaa Kooxda Daacish oo Duqeyn lagu dilay
Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay in Duqeyn diyaaradahooda aan duuliyaha laheyn ay ka fuisay gudaha dalka Siiriya loo maleenayo in lagu dilay Hogaamiye sare oo katirsanaa Kooxda Islaamiga ah ee Daacish.
Duqeynta oo dhacday Jimcihii lasoo dhaafay ayaa Dowlada Mareykanka waxa ay sheegtay in lala eegtay Omar al-Shishani , oo ahaa Hogaamiye sare oo katirsan Kooxda Daacish, waxa uuna ninkan kasoo jeeda dalka Georgia.
War kasoo baxay Wasaarada Difaaca dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay u dhawdahay in Duqeyn ka dhacday magaalada Al-Shadadi ee dalka Suuriya lagu dilay Omar al-Shishani , oo kamid ahaa saraakiisha sida weyn loo raadinayay ee katirsanaa Kooxda Daacish.
Omar al-Shishani, ayaa kamid ahaa taliyaasha sare ee dagaalyahanada kooxda Daacish, waxa uuna kooxdaasi u qaabilsanaa dhinaca dagaal galinta, Dowlada Mareykanka ayaana horey madaxa sargaalkan u dul dhigtay lacag dhan 5-milyan oo dollar.
Tunisia oo 28 dagaalamayaal taageersan Daacish ku dishay magaalo ku dhow xuduuda Libiya